काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताका आफ्नै प्रतिनिधिहरुद्वारा लेखिएको मूल कानुन संविधान जारी गरी भएको ऐतिहासिक दिनको सन्दर्भमा सबैप्रति शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालले डेढ वर्षको अवधिमा नै संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो वित्तीय संघीयताको व्यवस्थापन सहजरूपमा गरेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहको स्रोत व्यवस्थापन राजश्व बाँडफाँट तथा खर्च प्रणाली व्यवस्थित भएको बताएका छन् । संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेकाे सम्बाेधनकाे पूर्णपाठ ः
– लामो संघर्ष र बलिदानपछि पाँच वर्षअघि आजकै दिन हामीले नेपालको संविधान जारी गरेका थियौँ । जनताका आफ्नै प्रतिनिधिहरुद्वारा लेखिएको मूल कानुन–संविधान जारी गरी भएको यस ऐतिहासिक दिनको सन्दर्भमा सर्वप्रथम म, नेपाल सरकार तथा आफ्नो तर्फबाट यहाँहरु सबैमा पाँचौँ संविधान दिवस एवं राष्ट्रिय दिवसको हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
– त्यस्तो दिवस, जसको प्रतीक्षामा हामी नेपाली सात दशकदेखि संघर्षरत थियौँ,
– त्यस्तो दिवस, जुन दिन आम नेपालीहरु दशकौँको संघर्षको प्रतिफल लिपिबद्ध गर्न सफल भएको खुशीयालीमा उत्सव मनाइरहेका थिए । र, यसपछि लगातार सुरु हुने चाडपर्वको प्रतीक्षामा थिए ।
– दशकौँसम्म संघर्षमा हेलिएकाहरु जसले पीडा झेलेका छन्/बुझेका छन्, तिनका लागि आजको दिन गौरवगाथाले भरिएको दिवस हो । पारिवारिक बिछोड, उत्पीडन र छटपटीबाट उन्मुक्ति पाएका सबै नेपालीका लागि आजको दिन, स्वतन्त्रता दिवस पनि हो–प्राप्त उपलब्धिप्रति गर्व गर्ने उत्सव हो । त्यसैले यो हाम्रो राष्ट्रिय दिवस, न त फगत तामझाम हो, न आम जनतामा अरुचि हुने निरङ्कुश शासकहरुको ‘उर्दी र तामेली’ जस्तो हो ।
– गएको वर्ष राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा मैले आजको दिनलाई आधुनिक नेपालको इतिहासको महत्वपूर्ण ‘बेञ्च–मार्क’ भनेको थिएँ । संविधानका धारा र दफाहरुका बारेमा चर्चा गरेको थिएँ । संविधान प्राप्तिका लागि हामीले लडेको सात दशक लामोे संघर्ष र सफलतालाई सङ्क्षेपमा उल्लेख गरेको थिएँ । र लोकतन्त्र तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको निष्ठा, गतिशीलताप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ ।
– त्यस्तो निष्ठा, जहाँ वंशानुगत/जन्मजात श्रेष्ठता जस्तो अलोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कुनै स्थान हुन्न ।
– त्यस्तो गतिशीलता, जहाँ प्राप्त अधिकारलाई व्यवहारमा प्रयोग गरिन्छ । संविधानको कुन भाग, धारा वा दफामा के–कति अधिकार रह्यो वा रहेन जस्ता विषयमा अल्झिने भन्दा जुन बेला जे मिल्दैन, जुन अग्रगतिका अघि तगारो बन्छ, त्यसलाई त्यहीबेला विधिसम्मत ढङ्गले मिलाउँदै/पन्छाउँदै अघि बढिन्छ ।
– त्यतिखेर मैले संविधानले आत्मसात गरेका हाम्रा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र लक्ष्यबारे चर्चा गरेको थिएँ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा, पछि परेको नेपाली समाजलाई रुपान्तरण गर्न तपार्इं/हामीले संयुक्तरूपमा देखेको, पूरा हुने र पूरा गर्नै पर्ने सपना भएको उल्लेख गरेको थिएँ ।
– आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यस दशककै ७.१ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल भएको छ । सबै आर्थिक क्षेत्रको वृद्धिदर ५ देखि ९ प्रतिशतको बीचमा रहेको छ । र सवै प्रदेशहरुको आर्थिक वृद्धिदर पनि ६ देखि ८ प्रतिशतको बीच छ । यसरी यो वृद्धि क्षेत्रगत र प्रादेशिक दुवै रूपमा सन्तुलित र समतामूलक छ । यसले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा नै मुलुक समतामूलक विकास र समृद्धिको को मार्गमा अघि बढेको सङ्केत मिलेको छ ।
– ‘समृद्धिसँग जोडौं नाताः सबै नेपालीको बैंक खाता’ नारामा २०७६ बैशाख १ गतेबाट सुरु गरिएको ‘खोलौं बैंक खाता’ अभियानअन्तर्गत हालसम्म १ लाख ६५ हजार ६२२ जनाको बैंक खाता खोलिएको छ ।
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने कामको वाँडफाँड, राजश्व वाँडफाँड तथा अनुदान वितरण सम्वन्धी सुत्र ६ सय ३५ वटा स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।
– नेपालले डेढ वर्षको अवधिमा नै संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो वित्तीय संघीयताको व्यवस्थापन सहज रूपमा गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको स्रोत व्यवस्थापन राजश्व बाँडफाँट तथा खर्च प्रणाली व्यवस्थित भएको छ । आय/व्यय र निकासाको प्रतिवेदन विद्युतीय प्रणालीवाट हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । हाम्रो लागि यो असाधरण सफलता हो र नेपालको वित्तीय संघीयताको शीघ्र कार्यान्वयन बाँकी विश्वको लागिसफल उदाहरण हो ।
– यसै आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिएको भेहिकल/कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ प्रणालीमा ३० हजारभन्दा बढी फर्महरु जोडिइसकेका छन् । यसबाट राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्नेछ ।
– यसै आर्थिक वर्षबाट श्रमिकहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको छ ।गत वर्षको मंसीर १४ गतेबाट सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा हालसम्म सूचिकृत करिब ५ हजार रोजगारदातासँग कार्यरत ६६ हजार ४ सय ९योगदानकर्ता श्रमजीवीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भइसकेका छन् ।
– पहिलो पटक नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले मासिक १०० रुपैयाँबाट सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाईप्रति महीना ५ हजाररुपैंयाँ पु¥याउने प्रतिबद्धताअनुरुप २०७६ साउनबाट ३ हजार रुपैयाँ पु¥याइएको छ ।
– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्रियताका साथ भ्रष्टाचारविरुद्धको कारवाही अघि बढाइरहेको छ । अपराधीहरु, देशभरिका भू–माफियाहरु, राजश्व ठग्नेहरु, तस्कर र भ्रष्टहरुका विरुद्ध कतै नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाबाट, कतै स्ट्रिङ अपरेशन मार्फत निर्मम कार्वाही सुरु गरिएको छ । यो सरकार गठन भएदेखि हालसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विभिन्न कसुरमा ५ सय ४० विरुद्ध रु. ४ अर्ब २५ करोड बिगो माग दाबी गरी मुद्दा चलाइएको छ ।
– हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्ष भनेका थियौं। कानुनहरु बने, जनशक्ति विन्यास भए । स्रोतको न्यायोचित वितरण भयो । तीनवटै तहमा सरकार सञ्चालनकालागि आवस्यक न्यूनतम भौतिक संरचना निर्माण भए । विकासकालागि आधार बनेको छ– कतै जग हालिएको छ, कतै पहिलो वा दोस्रो तल्ला थपिएको छ । विकासका लागि आवश्यक अरु तल्लाहरु थपिनेछन्, थप्दै/थप्दै अघि बढिने छ ।
– मैले आफैँसँग पटक–पटक प्रश्न गर्ने गरेको छु– आधा शताब्दीअघि कलिलै वयमा आप्mना दौंतारीहरुसँगै घरबार छोडेर हिंडेको केका लागि ? र, जवाफ पाउने गरेको छु– मुलुक बनाउनका लागि । तपाईं हाम्रा साझा सपना पूरा गर्नका लागि । यी सबै संघर्षहरुमा मेरो संलग्नता कुनै दिन प्रधानमन्त्री पदको विज्ञापन खुल्ला र निवेदन गरौँला भनेर किमार्थ थिएन ।
– अहिले हामीलाई जनसाङ्ख्यिक लाभ पनि छ । हाम्रो जनसङ्ख्यामा ३४ वर्षमुनिको सङ्ख्या– ६५.५ प्रतिशत छ । १४ वर्षमुनिका ३४.८ प्रतिशत किशोर/किशोरीहरुको सङ्ख्यालाई कटाउने हो भने पनि १५ देखि ३४ वर्ष उमेर समूहका सक्रिययुवासङ्ख्या ३०.५ प्रतिशत छ । ६५ वर्ष माथिका पाकानागरिकको जनसङ्ख्या त जम्माजम्मी ४ प्रतिशत मात्रै छ ।
– मैले पटक–पटक भन्दै आएको छु, आजको आवश्यकता उशृङ्खलता र अराजकता हैन, सामाजिक सद्भाव, आपसी एकता र सहिष्णुता हो । आजको लडाइँ लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि हैन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र सुदृढ गर्नका लागि हो ।
– पाइला नै नचलाई कसरी दौडने ? यथास्थितिमा रहेर परिवर्तनको अनुभूति कसरी दिने ? रुपान्तरण हैन प्रतिक्रिया, परिणामसँग साइनो नै नहुने प्रक्रियामा किन र कति अल्झिरहने ? विना–मुद्दाका विषयमा मूल मुद्दाजस्तो बहस/विवादको माहौल किन बनाउने ? अझै पनि ‘हुँदैन/सकियो’ जस्ता असन्तुष्टिको खेतीलाई उकेराकिन लगाउने ? अब हामीले तरिका फेर्नैपर्छ ।
– यस आर्थिक वर्षबाट गरिने कामहरुलाई नतिजामुखी बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौता सुरु गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरुले, मन्त्रीहरुसँग सचिवहरुले र सचिवहरुसँग मातहतका अधिकारीहरुले नीति/कार्यक्रमद्वारा तय गरिएका एक वर्षमा गर्नुपर्ने प्रत्येक काम त्यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । ‘अनुगमनको पनि अनुगमनलाई’ थप प्रभावकारी बनाउन डिजिटल पोर्टल र एक्सन रुम सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
– प्रदेशको काम प्रभावकारी बनाउन वरिष्ट सहसचिवहरूलाई प्रदेश सरकारको सचिवका रूपमा खटाइएको छ । प्रोत्साहन र दण्डको प्रणाली स्थापना गर्न विशिष्ट श्रेणीमा पदोन्नतिको आधार प्रदेश सरकारको कामलाई पनि बनाउने नीति सुरु गरिएको छ । फाइल बढुवाबाट सिर्जना हुने अकर्मण्यतालाई अन्त्यगर्न उमेर वा नोकरीको जेष्ठता हैन कार्यकुशलतालाई प्राथमिकतामा राखिने छ । ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्ने आकाङ्क्षामा आवश्यक निर्णयसमेत नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनेछ ।
– काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रूतमार्गको निर्माण सरकारको यही कार्यकालभित्र सम्पन्न गर्नेगरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ ।
– नयाँ संविधान र त्यस अन्तर्गतको तीनै तहको आम निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै राजनीतिक आन्दोलनको चरण अब समाप्त भएको छ । लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रिया जारी छ । अब पनि राजनीतिको नाममा शान्ति, सुरक्षा र राष्ट्रिय एकतालाई खल्बल्याउने काम कहीँकतैबाट भए संविधान र कानुनविपरीतका त्यस्ता कुनै पनि गतिविधि सरकारले रोक्छ ।
– छिट्टै सुरु हुने दसैँ, तिहारसहित विभिन्न चाडपर्वहरुको अग्रिम शुभकामना ।